GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
NÁ NGWỤCHA oge ndịozi Jizọs, e nwere nsogbu ndị bịaara Geyọs na ụmụnna ndị ọzọ. Ndị na-akụzi ihe na-abụghị eziokwu chọrọ itisa ọgbakọ, mee ka okwukwe ụmụnna nyụọ ka ọkụ. (1 Jọn 2:18, 19; 2 Jọn 7) Otu nwoke aha ya bụ Dayọtrefis nọ na-ekwu “okwu ọjọọ” banyere Jọn onyeozi na ndị ọzọ. Ọ naghị ekwe ele ụmụnna bịara ileta ọgbakọ ọbịa. Ọ na-agbakwa mbọ ka ndị ọzọ na-eme ka ya. (3 Jọn 9, 10) Ọ bụ ihe ndị a nọ na-eme mgbe Jọn degaara Geyọs akwụkwọ ozi n’ihe dị ka n’afọ 98. A na-akpọ akwụkwọ ozi a “Jọn nke Atọ.” Ọ dị n’Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst.
Geyọs ji obi ya niile na-efe Jehova n’agbanyeghị nsogbu ndị ahụ bịaara ya. Olee otú o si gosi na o ji obi ya niile na-efe Jehova? Gịnị mere anyị ji kwesị iṅomi Geyọs? Olee otú akwụkwọ ozi Jọn dere ga-esi enyere anyị aka ime otú ahụ?
AKWỤKWỌ OZI JỌN DEGAARA EZIGBO ENYI YA
Onye dere Jọn nke Atọ kpọrọ onwe ya “okenye.” Ihe a mere ka Geyọs, bụ́ onye o weere ka nwa ya ọ hụrụ n’anya, mata na ọ bụ Jọn onyeozi. Jọn kpọrọ Geyọs, ‘onye m hụrụ n’anya n’ezie.’ O kwuziri na ya nwere olileanya na okwukwe Geyọs siri ike otú ahụ o nwere ahụ́ ike. Ihe a o kwuru gosiri na ọ jara Geyọs mma.—3 Jọn 1, 2, 4.
O nwere ike ịbụ na Geyọs bụ okenye n’ọgbakọ, ma e kwughị ya hoo haa n’akwụkwọ ozi ahụ. Jọn jara Geyọs mma maka ile ụmụnna ọbịa n’agbanyeghị na ọ hụtụbeghị ha. Jọn weere ya na ihe a Geyọs mere gosiri na o kwesịrị ntụkwasị obi ebe ọ bụ na kemgbe ụwa, ile ọbịa so n’ihe e ji mara ndị na-efe Chineke.—Jen. 18:1-8; 1 Tim. 3:2; 3 Jọn 5.
Otú Jọn si jaa Geyọs mma maka ọbịa o lere ụmụnna gosiri na Ndị Kraịst na-esikarị n’ebe Jọn nọ gaa leta ọgbakọ dị iche iche, lọtakwa. Ọ ga-abụ na ha na-akọrọ Jọn ihe ha hụrụ. O nwere ike ịbụ otú ahụ ka Jọn si nụ ihe na-eme n’ọgbakọ ndị ahụ.
Ndị Kraịst ndị gara ileta ọgbakọ ọzọ kwesịrị ịnọ n’ụlọ ụmụnna. A na-elekarị ụlọ ndị njem anya ọjọọ. A naghị elekọta ndị na-ehi na ya nke ọma. A na-aṅụkwa omume rụrụ arụ ka mmiri n’ebe ahụ. N’ihi ya, o kwe omume, ndị njem ma ihe na-anọ n’ụlọ ndị enyi ha; Ndị Kraịst ndị na-aga ileta ọgbakọ ọzọ na-anọ n’ụlọ ụmụnna.
“HA GAWARA N’IHI AHA YA”
Jọn gwara Geyọs ka o lee ụmụnna ọbịa ọzọ, n’ihi na Jọn gwara ya na ‘mgbe ụmụnna ndị ahụ na-ala,’ ka o meso ha otú Chineke chọrọ. Ihe ọ pụtara bụ na ọ ga-enye ha ihe ha ga-eri n’ụzọ nakwa ihe ga-ezuru ha ruo mgbe ha ga-agaru ebe ha na-aga. O doro anya na Geyọs emeela otú ahụ mgbe ụmụnna bịara leta ya, ebe ọ bụ na ha kọọrọ Jọn gbasara ịhụnanya Geyọs na okwukwe ya.—3 Jọn 3, 6.
O nwere ike ịbụ na ndị ọbịa ndị ahụ bụ ndị ozi ala ọzọ, ndị Jọn dunyere ozi, ma ọ bụ ndị nlekọta na-ejegharị ejegharị. Nke ọ bụla ọ bụ, ọ bụ ozi ọma mere ka ha palie njem. Jọn kwuru, sị: “Ha gawara n’ihi aha ya.” (3 Jọn 7) Jọn ebula ụzọ kwuo gbasara Chineke n’amaokwu nke isii. N’ihi ya, ọ dị ka ọ̀ bụ aha Jehova ka Jọn bu n’obi kwuo “n’ihi aha ya.” O doro anya na ụmụnna ndị ahụ nọ n’ọgbakọ Ndị Kraịst, kwesịkwa ka a nabata ha. Ọ bụ ya mere Jọn ji dee, sị: “Anyị ji ụgwọ ịnabata ndị dị otú ahụ nke ọma, ka anyị wee ghọọ ndị ha na ha na-arụkọ ọrụ n’eziokwu ahụ.”—3 Jọn 8.
JỌN NYEERE GEYỌS AKA MGBE NSOGBU BỊAARA YA
Ihe mere Jọn ji degara Geyọs akwụkwọ ozi ahụ abụghị naanị ka o kelee ya. Jọn chọkwara inyere ya aka imeri nsogbu tara akpụ. N’ihi ihe ụfọdụ, otu nwanna aha ya bụ Dayọtrefis achọghị ịna-ele ụmụnna bịara ileta ọgbakọ ọbịa. Ọ gbalịdịrị igbochi ndị ọzọ ile ha ọbịa.—3 Jọn 9, 10.
O doro anya na Ndị Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi agaghị achọ ịnọ n’ụlọ Dayọtrefis ọ bụrụgodị na o kwere ha omume. Ọ chọrọ ịnọ n’ọkwá kachanụ n’ọgbakọ. O nweghị ihe o ji ihe Jọn kwuru kpọrọ. Ọ na-ekwukwa okwu ọjọọ gbasara Jọn onyeozi na ndị ọzọ. Jọn ekwughị na Dayọtrefis na-akụzi ihe na-abụghị eziokwu. Ma ọ naghị ekwe ka e mee ihe Jọn kwuru. Otú Dayọtrefis si jiri aka abụọ na-azọ ọkwá nakwa ụdị àgwà ndị ụwa ọ na-akpa gosiri na ọ naghị erubere Chineke isi. Ihe o mere na-egosi na nwanna nwee oké ọchịchọ ma ọ bụ dị mpako, o nwere ike itisa ọgbakọ. Ọ bụ ihe mere Jọn ji gwa Geyọs ka ọ ghara ‘ịna-eṅomi ihe ọjọọ.’ Ihe a o kwuru gbasakwara onye ọ bụla n’ime anyị.—3 Jọn 11.
IHE MAGBURU ONWE YA MERE ANYỊ JI KWESỊ ỊNA-EME IHE ỌMA
Jọn kwuru na otu nwanna aha ya bụ Dimitriọs emeghị ka Dayọtrefis. Jọn dere, sị: “Ha niile gbaara Dimitriọs àmà . . . N’ezie, anyị onwe anyị na-agbara ya àmà, ị makwaara na àmà anyị na-agba bụ eziokwu.” (3 Jọn 12) Ọ ga-abụ na Dimitriọs chọrọ ka Geyọs nyere ya aka. O nwekwara ike ịbụ na Jọn ji akwụkwọ ozi ya nke atọ kọwaara Geyọs onye Dimitriọs bụ nakwa na ọ bụ ezigbo nwanna. Ọ dị ka ọ̀ bụ Dimitriọs gara nye Geyọs akwụkwọ ozi ahụ. Ebe Dimitriọs so ná ndị Jọn na-edunye ozi, bụrụkwa onye nlekọta na-ejegharị ejegharị ma eleghị anya, o nwere ike ịbụ na o mesikwuru ihe Jọn dere ike.
Gịnị mere Jọn ji gbaa Geyọs ume ka ọ na-ele ọbịa ebe ọ bụ na ọ na-eme otú ahụ? Jọn ọ̀ chọpụtara na e kwesịrị imesikwu Geyọs obi ike? Ọ̀ ga-abụ na ọ na-echegbu onwe ya na Geyọs nwere ike kwụsị ile ọbịa n’ihi na Dayọtrefis chọrọ ịchụpụ ụmụnna ndị na-ele ọbịa n’ọgbakọ? Nke ọ bụla ọ bụ, Jọn mesikwuru Geyọs obi ike, sị: “Onye na-eme ihe ọma sitere na Chineke.” (3 Jọn 11) Ọ bụ ya bụ ihe magburu onwe ya mere anyị ji kwesị ịna-eme ihe ọma n’adaghị mbà.
Akwụkwọ ozi a Jọn dere ò mere ka Geyọs ghara ịkwụsị ile ụmụnna ọbịa? Anyị nwere ike ikwu na o mere otú ahụ ebe ọ bụ na Jọn nke Atọ mechara soro n’akwụkwọ ndị dị na Baịbụl iji gbaa ndị ọzọ ume ka ha “na-eṅomi ihe ọma.”
IHE NDỊ ANYỊ MỤTARA NA JỌN NKE ATỌ
O nweghị ihe ọzọ anyị ma banyere Geyọs, bụ́ ezigbo nwanna anyị biri n’oge ochie. Ma, obere ihe a Baịbụl kọrọ gbasara ya na-akụziri anyị ọtụtụ ihe.
Olee ụzọ dị iche iche anyị ga-esi ‘na-ele ọbịa’?
Nke mbụ, e nwere ike ikwu na ihe mere ọtụtụ n’ime anyị ji mụta eziokwu Baịbụl bụ na e nwere ụmụnna wepụtara onwe ha bịa kụziere anyị ya. O doro anya na ọ bụghị ụmụnna niile taa na-aga ebe dị anya n’ihi ozi ọma. Ma, anyị nwere ike ịna-akwado ndị na-aga ebe dị iche iche ma na-agba ha ume, dị ka onye nlekọta sekit na nwunye ya. Ọ bụ ihe Geyọs mere. Anyị nwekwara ike ịna-enyere ụmụnna ndị kwagara n’obodo ọzọ aka, ma ọ bụ ná mba ha ma ọ bụ ná mba ọzọ, bụ́ ebe a chọkwuru ndị na-ekwusa ozi ọma. N’ihi ya, ka anyị ‘na-ele ọbịa.’—Rom 12:13; 1 Tim. 5:9, 10.
Nke abụọ, o kwesịghị iju anyị anya ma e nwee ndị na-ekweghị eme ihe e kwuru ka e mee n’ọgbakọ, ọ bụ eziokwu na ụdị ihe ahụ anaghị emekarị. E nwere ndị na-ekweghị eme ihe Jọn kwuru ka e mee. Ụfọdụ mekwara Pọl otú ahụ. (2 Kọr. 10:7-12; 12:11-13) Gịnịkwanụ ka anyị ga-eme ma anyị hụ ndị na-eme otú ahụ n’ọgbakọ? Pọl gwara Timoti, sị: “Ohu nke Onyenwe anyị ekwesịghị ịlụ ọgụ, kama o kwesịrị ịbụ onye na-emeso mmadụ niile n’ụzọ dị nwayọọ, onye ruru eru izi ihe, onye na-ejide onwe ya mgbe ọnọdụ dị njọ, jiri nwayọọ na-ezi ndị isi ike ihe.” Anyị jide onwe anyị ma a kpasuo anyị iwe, o nwere ike ime ka ụfọdụ ndị na-akatọ ndị ọzọ jiri nwayọọ nwayọọ gbanwee àgwà ha. Jehova nwere ike ime “ka ha nwee nchegharị nke na-eduga n’ezi ihe ọmụma nke eziokwu.”—2 Tim. 2:24, 25.
Nke atọ, anyị hụ ụmụnna ndị na-erubere Jehova isi n’agbanyeghị na a na-emegide ha, anyị kwesịrị ịna-aja ha mma maka ya. O doro anya na Jọn onyeozi gbara Geyọs ume ma mesie ya obi ike na ọ na-eme ihe dị mma. Otú ahụ ka ndị okenye kwesịkwara ịna-eme. Ha kwesịrị ịna-agba ụmụnna ume ka ha ghara ‘ịda mbà.’—Aịza. 40:31; 1 Tesa. 5:11.
N’asụsụ Grik e ji dee Baịbụl, okwu ndị dị n’akwụkwọ ozi a Jọn degaara Geyọs dị naanị narị abụọ na iri na itoolu. N’ihi ya, ọ bụ akwụkwọ a kacha ntakịrị n’akwụkwọ ndị dị na Baịbụl. Ma, ọ baara Ndị Kraịst ezigbo uru n’oge anyị a.